IDaisy: Irobhothi le-Apple elibhubhisa ama-iPhones angama-200 ngehora | Izindaba zamagajethi
UDaisy: Irobhothi elisha lika-Apple elibhubhisa ama-iPhones
U-Eder Esteban | | Apple, Izaziso, I-Robotics
Eminyakeni embalwa edlule u-Apple wethule irobhothi elibizwa ngeLiam, okwakungumsebenzi wakhe ukuqaqa ama-iPhones ngokuyimpumelelo. Ngale ndlela, izingxenye ezazisesimweni esihle zazingatholakala futhi ziphinde zisetshenziswe. Manje, inkampani yethula irobhothi elisha, ngesikhathi esifanele soSuku Lomhlaba. Imayelana neDaisy, irobhothi umsebenzi walo ukuqeda ama-iPhones.
Leli robhothi lilahla liphinde livuselele ama-iPhones ngendlela ephumelela kakhulu, kakhulu kuneLiam. Bathi iyakwazi ukuqaqa futhi ihlukanise izingxenye ezingaba ngamakhulu amabili amafoni ngehora. Futhi, izingxenye ezibaluleke kakhulu zisetshenziswe kabusha ocingweni.
Ngale ndlela, sibonga iDaisy, i-Apple ifuna ukwenza kabusha ngendlela engcono ekukhiqizeni kwayo. Ngakho-ke, bayakugwema ukucekela phansi izinto ezibalulekile ezingasetshenziswa futhi kweminye imikhiqizo. Umsebenzi oyinhloko we-robot kuzoba ukuhlukanisa phakathi kwalezi zingxenye ezinhle nezimbi.
Yize ikwenza kahle nangendlela ephumelela kakhulu kunerobhothi langaphambilini. Ngakho-ke i-Daisy ayigijimi ngokushesha kuphela, kepha kukhona nezinga lephutha eliphansi. Ngakho-ke inani lezinto ezinhle ezingasetshenzisiwe alinakwa kuleli cala.
U-Apple wethule le robot ngoSuku Lomhlaba. Le nkampani ifuna ukufundisa abathengi ngokubaluleka kokusebenzisa kabusha nokuvikela umhlaba. Ngalesi sizathu, baphinde bahlela isenzo esizoqondana nokwethulwa kukaDaisy.
Kuze kube ngumhlaka-30 Ephreli, kudivayisi ngayinye lapho amakhasimende abuya khona ezoshintshaniswa ngenye noma isetshenziswe kabusha, bazonikela. Ngokuqondile, izonikelwa kuConservation International. Kuyi-NGO e-Arlington, eVirginia (e-United States) ezinikele ekuvikeleni imvelo, isimo sezulu esizinzile, amanzi ahlanzekile nemithombo yokudla.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izaziso » UDaisy: Irobhothi elisha lika-Apple elibhubhisa ama-iPhones
I-Razor X ibhodi ende ende kagesi enentengo efanelekile nokusebenza okuhle